Sidee si ay u qoraan / badalo radio Lugood in mp3 la Lugood taariikhqorihii radio
> Resource > Lugood > Sidee loo Diiwaan Lugood Radio in MP3
Ma doonaysaa in ay ku riday idaacadaha Lugood in qalabka la qaadi karo si aad sida Lugood gelinaya iibsaday songs? No, nin, waxaad ka Lugood Store iibsan kartaa heeso, laakiin ma radio Lugood. , Raadiyayaasha Lugood Sida caadiga ah waxaa laga heli karaa oo keliya marka aad ka heli internetka. Waa maxay nixi ah, huh? Si kastaba ha ahaatee, iyada oo hab, ee aad u awoodo. Waxaad dhegaysan kartaa offline raadiyaha sida aad jeceshahay. Halkan waa raadiyaha hab-diiwaan Lugood. Waxaa loola jeedaa diinta radio Lugood in MP3 iyo hirgalintiisa kula.
Si aad u gaarto goolkii, waxaad u baahan tahay qalab wax lagu qoro ah. Halkan, waxaan ku talinaynaa mid ahaa taariikhqorihii sare audio, Streaming Audio Recorder . Waa taariikhqorihii ugu fiican audio ee aan abid loo isticmaalo. Waxay awood u isticmaala si ay u qoraan radio wax Lugood leh 1: 1 oo tayo leh la fudud "dhuftay & record" a. Waa sidan sidii ay u qoraan radio ka Lugood adigoo isticmaalaya Streaming Audio Recorder ah.
Ka dib markii aad ka soo dejisan app this, guji faylka .exe si ay u rakibi. Habka rakibidda wuxuu noqon doonaa mid aad u sahlan oo dhakhso ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii barnaamijka xusuusinayaa "No rakibi qalabka audio dalwaddii", fadlan raac tallaabooyinkan si uu u xaliyo dhibaatada.
2 radio Record Lugood
Si loo hubiyo in aad ka heli karto raadiyaha dhameystirtay duubay, fadlan riix "Record" button marka hore ka dibna ay u helaan raadiyaha aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo in Lugood oo ciyaaro. Eeg Streaming Audio Recorder bilaabmin in ay ka shaqeeyaan? Taasi waa! Marka ay dhameystaan ​​Lugood Radio taariikhqorihii qoro radio Lugood, si deg deg ah ayaa kuu sheegi doono waa la yeelay. Si aad u joojiso duubay, riix "Record" mar kale.
Haddii aadan awoodin in aad ku dhawaad ​​ahaan si ay u qoraan radio Lugood, aad Streaming Audio Recorder ka codsan kartaa inay kuu sameeyo. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa ay tagaan "Wakhtiga jadwaliye", waqti bilowga iyo dhammaadka wakhtiga loogu duubo. Markaas Radio Lugood ee taariikhqorihii duubi kartaa audio ka radio Lugood si toos ah aad u. Marka aad soo laabtaan, kaliya hesho barnaamij aad u baahan tahay in aad kombuutarka.
Cool, sax? Waa maxay sababta aan isku dayaan in ay barnaamijka rikoor ka radio Lugood hadda? Iyadoo Streaming Audio Recorder , waxaad ka heli kartaa waxa aad maqli.
Sida Loo Doorto ka Lugood Radio iyo Pandora